Cristiano Ronaldo ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ တကယ့်ကို အကောင်းဆုံးပါပဲ
WED 05 JUN 2019UEFA NATIONS LEAGUE - SEMI-FINAL
Portugal31 Switzerland
Cristiano Ronaldo (25' minutes, 88' minutes, 90' minutes)	 FT Rodríguez (57' minutes pen)
Cristiano Ronaldo ရဲ့ ဟက်ထရစ်နဲ့ Nations League ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ
6 Jun 2019 . 10:50 AM
ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းက ကစားခဲ့တဲ့ Nations League ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန်ကို ( ၃ – ၁ )နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ ၃ – ၁ ဆွစ်ဇာလန်
လူငယ်မျိုးဆက် ကစားသမားတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာတော့ အပြောင်းအလဲတချို့ရှိခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ ယာအိုဖိလစ် Joao Felix တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကိုတော့ ချာကာ Xhaka ၊ ရှကီရီ Shaqiri ၊ ဆီဖာရိုဗစ် Seferovic တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ပြီး (၂)သင်းလုံးဟာ ပွဲအစပိုင်းမှာ အခွင့်အရေးကိုယ်စီရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲချိန်(၂၅)မိနစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်း ဦးဆောင်ဂိုးစရခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒို က ဖရီးကစ်ကနေ တိကျပြင်းထန်တဲ့ ကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးပေးလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းဟာ ပေါ်တူဂီဘက်ကို ဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန်(၅၇)မိနစ်မှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်း ပယ်နယ်တီကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ရိုဒရီဂွက်ဇ် Rodríguez က အသင်းအတွက် ချေပဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်ဂိုး (၁)ဂိုးစီဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့သလို သရေနဲ့ပဲ ပွဲပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ ထင်နေချိန်မှာပဲ စီရော်နယ်လ်ဒို က ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၈၈)မိနစ်မှာ ဘာနာဒိုဆေးဗားလ် Bernardo Silva ချိုးပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို စီရော်နယ်လ်ဒို က အလိုက်သင့်ပြေးဝင်ပြီး ကောင်းမွန်တိကျတဲ့ ကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဂိုးသွင်းပြီး သိပ်မကြာခင် ပွဲချိန်မိနစ်(၉၀)မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒို က ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် တတိယဂိုးကိုတော့ သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆွစ်ဇာလန်ခံစစ်ကစားသမားတွေကို ခြေယောင်ပြပြီး ကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းသွင်းဂိုးဟာ (၈၈)ဂိုးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်သလို ဒီပွဲမှာသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဟက်ထရစ်ကလည်း သူ့ရဲ့ကစားသမားဘ၀ (၅၃)ကြိမ်မြောက် ဟက်ထရစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို ဟာ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ကစားပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ(၁၀)ပွဲ ဆက်တိုက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Ref: OptaJoe Twitter , Bleacher Report Football
Photo: OptaJoe Twitter , Kenya Latest , Daily Mail
အသက်(၂၂)နှစ်မပြည့်ခင် Cristiano Ronaldo ရဲ့ သွင်းဂိုးအရေအတွက်နဲ့ တူညီသွားတဲ့ Rashford
by Naing Linn . 33 mins ago
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၂)မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားများ
ကစားသမားဘ၀ကနေ အနားယူမယ့်အကြောင်းကို ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo
နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေကို ပရိသတ်တွေပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ပြောင်များ (၂)
သမိုင်းတစ်လျှောက် ကစားသမားခေါ်ယူဖို့အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Mourinho
စီးရီးအေအသင်းကြီးတွေရဲ့ လက်ရှိအနေအထားများ (၁)